အဘို့မှာတော့ ATR လို့ရေးပြီး 42 / 72 ၏ installation P3D ဖျက်ပစ်ရန်တပ်ဖွဲ့များ FSX-Installation?
မေးခွန်း အဘို့မှာတော့ ATR လို့ရေးပြီး 42 / 72 ၏ installation P3D ဖျက်ပစ်ရန်တပ်ဖွဲ့များ FSX-Installation?
1 months ago2တစ်နှစ် #1351 by gero-1954
ငါအဘို့အ ATR 42 / 72 install လုပ်ရန်ကြိုးစား P3D4, ဒါပေမယ့်ငါဖယ်ရှား-install ငါ့အဖို့တောင်းပါ၏အစအဦးမှာ FSX- နှင့် FSX: SE ATR ရဲ့ (ပူးတွဲပါစခရင်ပုံကိုကြည့်ပါ) ။
အားလုံးပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ subdirectories ၌ရှိကြ၏။
သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုခငျြ FSX-Installations - ဒါကြောင့်ငါ cancelld P3D4-တပ်ဆင်ခြင်း။
မည်သူမဆိုထိုပြဿနာများ၏အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား ဒါမှမဟုတ်များမှာ FSX(ယာယီ) အတူတကွအတူဖျက်ပစ်ခံရပြီးနောက် -Versions re-installed P3D4-တပ်ဆင်ခြင်း?
1 months ago2တစ်နှစ် #1356 by geowil
what I do is back up the atr files in aircraft file plus panels and sound and effects files in main directory copy toadifferent location on you pc oraexternal hard drive then let the program delete the files and let it install it may put the files back on fsx နှင့်သင့်ရေနွေးငွေ့တဦးတည်းကိုသင်ပြန်သို့တက်ကျောထောက်နောက်ခံဖိုင်များကူးယူပြီး paste မဟုတ်ပါလျှင် fsx and steam and all will be back in place easy as. it is easer to back up all those files above than trying to pick out the ones belong to the atr p.s when it asked you to overwrite the files just say yes to all wont hurt the game.
0.861 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်